Tamin'ny taona 2019, ny indostrian'ny refractory dia hampiroborobo ny fanavaozana rafi-pamatsiana ho an'ny lafiny famatsiana. Miorina amin'ny ankapobeny ny fampandehanana ny indostria, nitombo kely ny vokatra, ary nihatsara tokoa ny haavon'ny fampandrosoana maitso.
1. Ny famoahana dia maharitra ary miakatra. Tamin'ny taona 2019 dia nahitana 24.308 tapitrisa taonina ny vokatra vokarin'ny refractory manerana ny taona, fitomboana 3.7% isan-taona. Anisan'ireny, ny vokatra refractory matevina dia 13,414 tapitrisa taonina, fitomboan'ny 1.1% isan-taona; Ny vokatra reflektikan'ny insulation dia 589,000 taonina, fitomboana 8.9% isan-taona; Ny vokatra refractory tsy nijanona dia 10,305 tapitrisa taonina, fitomboana 6,9% isan-taona.
2. Faharoa, lehibe kokoa ny tsindry mahasoa. Misy fitaovana vita amin'ny refractory amin'ny taona 1958, ny vokatra refractory ary ny orinasa serivisy mifandraika amin'ny orinasa. Tratran'ny fihenan'ny fihenan'ny vidin'ny vokatra refractory, ny fidiram-bolan'ny orinasa lehibe amin'ny taona 2019 dia 206.92 miliara yuan, mihena 3.0% isan-taona, ary ny totalin'ny tombom-bola dia 12,80 miliara yuan, isan-taona. fihenan'ny 17,5%.
3. Nianjera kely ny fanondranana. Tamin'ny taona 2019 dia ny volan'ny varotra entana sy ny vokatra refractory dia 3.52 miliara amerikana, ary ny totalin'ny fanondranana isan-taona dia 5.95 tapitrisa taonina, mihena 6,3% isan-taona. Anisany, ny volan'ny fanondranana fitaovana vita amin'ny refractory dia 4.292 tapitrisa taonina, nidina 5.7% isan-taona; Ny vokatra azo avy any ivelany dia 1.666 tapitrisa taonina, nidina 7,7% isan-taona.
4. Fanatsarana ny haavo maitso. Tamin'ny taona 2019, ny tontolon'ny indostria manontolo dia hanalalaka bebe kokoa ny fifehezana ny loharano fandotoana, ary maro ny faritany sy tanàn-dehibe no namoaka ny lafaoro indostrialy sy ny fikarakarana ny fandefasana fandotoana kiln ho fampiroboroboana ny fandefasana ny fandotoana hahatratra ny fenitra. Ny haavon'ny fampandrosoana maitso amin'ny orinasa dia nihatsara tokoa. Ny orinasa refractory fito no nofinidin'ny "the green pabrik" nataon'ny Ministeran'ny indostria sy ny teknolojia fampahalalana. "List.
Amin'izao fotoana izao dia haingana ny fanovana sy fampivoarana ny indostria refractory, saingy mbola miatrika tsy fahatokisana maro ny raharaha. Ny olana toy ny overcapacity, ambany fitanana ary ny tsy fahaizan'ny fanavaozana dia mbola misy. Ny dingana manaraka dia ny fanafainganana ny fampiharana ny teknolojia vaovao sy ny famolavolana vokatra vaovao, miankina amin'ny herin'ny renivohitra sy ny marika hampitomboana ny fifantohana amin'ny indostria, hanatsarana ny fahaizan'ny indostria sy ny fanamafisana, hanafainganana ny haingam-pandeha sy ny fanavaozana, ary hampiroborobo ny fivoaran'ny kalitao avo lenta indostrian'ny fifandanjana.